Etu esi ejikọ ọdịnaya nke onye ọrụ na - enweghị ebubo | Martech Zone
Etu esi ejikọ ọdịnaya nke onye ọrụ na-ebughi ebubo
Ihe onyonyo nke onye ọrụ mepụtara abụrụla ihe bara uru maka ndị na-ere ahịa na ụdị mgbasa ozi, na-enye ụfọdụ ọdịnaya na ọnụ ahịa bara uru maka mkpọsa – belụsọ na ọ ga - ebute ikpe ọtụtụ nde dollar. Kwa afọ, ọtụtụ ụdị na-amụta nke a n'ụzọ siri ike. Na 2013, onye na-ese foto gbara BuzzFeed maka $ 3.6 nde mgbe ịchọtara saịtị ahụ jiri otu foto Flickr ya na-enweghị ikike. Getty Images na Agence France-Presse (AFP) tara ahụhụ a $ 1.2 nde ikpe mgbe o sere foto Twitter nke onye na-ese foto na-enweghị nkwenye.
Esemokwu dị n'etiti ihe eji eme ihe (UGC) na ikike dijitalụ abụrụla ihe egwu maka ụdị. UGC abụrụla isi ihe ga - emepeghe otu puku afọ, bụ ndị ekwupụtara na ha nyefere ihe karịrị awa 5.4 kwa ụbọchị (yabụ, pasent 30 nke oge mgbasa ozi niile) na UGC, ma kwuo na ị tụkwasịrị ya obi karịa ọdịnaya ndị ọzọ niile. Agbanyeghị, ịgba akwụkwọ dị elu, ga-emecha mezie ntụkwasị obi na izi ezi nke UGC chọrọ ịmepụta.
Nghọtahie a na-enwekarị bụ na ọdịnaya ntanetị mmekọrịta bụ egwuregwu ziri ezi maka ndị ahịa. Ọ gwụla ma ị na-arụ ọrụ maka netwọkụ mmekọrịta, nke a abụghị ikpe. Dị ka ọmụmaatụ, Usoro Facebook nke ọrụ kpuchido ikike ụlọ ọrụ iji yana ọdịnaya ndị ọrụ ikikere nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Twitter si zuru ụwa ọnụ, na-abụghị nanị, akwụkwọ ikike na-enweghị eze (yana ikike inye iwu) na-enye ha nnwere onwe zuru oke iji monetize ọdịnaya ndị ọrụ. Flickr nwere enweghị ikike iji ọdịnaya dị otú ahụ jiri ha.
Netwọk mmekọrịta na-amara nke ọma karịa iji ikike a eme ihe. Dị ka Instagram chọpụtara na mbubreyo 2012, usoro ọrụ nke na-ekwe nkwa ịgbanwe onyonyo nkeonwe na mgbasa ozi - na-enweghị akwụ ụgwọ - nwere ike ịkpalite mgbasa ozi mgbasa ozi na-atụ egwu ọkara ọrụ ntọala. Ọ bụrụ na netwọk mmekọrịta enweghị ike ịghachite UGC na enweghị mkpu ọhaneze, ị nweghị ike.
Ọ bụ ezie na ndị na-ere ahịa maara ihe ize ndụ nke iweghachi ọdịnaya ndị ọrụ na-enweghị nkwenye, ohere nke ijide ha yiri ka ọ dị ala. Oge dị mfe anyị nwere 'ịgha ụgha' nwere ike imebi mkpebi anyị. Anyị na-enwe anyaụfụ maka ihe ịga nke ọma nke UGC dị ka ALS Ice Bucket Challenge, ma nabata ihe ịma aka iji zoo na ọkwa ahụ. Na njedebe, Otú ọ dị, ndị na-ere ahịa ga-asọpụrụ ikike dijitalụ ma ọ bụ lelee UGC azụ azụ.
Yabụ kedu ka anyị ga - esi dozie nsogbu a? Ikike nke ikike ọgụgụ isi dị nso ma hụ m n'anya - na nkwupụta zuru oke, m hiwere Scoopshot, ihe ngosi ihe nkiri na-eweta igwe mmadụ iji nyere aka ịlụso nsogbu a ọgụ. Ọ bụ ezie na enweghị otu ụzọ iji nweta, ịhazi na itinye UGC, teknụzụ ị na-ahọrọ kwesịrị inye usoro dị mma maka iji gosipụta onyonyo, ịdebe mbipụta ihe atụ na ịnweta ikike onyonyo. Na nkọwa zuru ezu, nke a bụ okwu atọ ị ga-emerịrị iji jiri UGC rụọ ọrụ nke ọma:
Kedu ka m si mara na onyogho bụ eziokwu? Mgbe foto bisịrị na netwọkụ mmekọrịta, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume igosipụta akụkọ ya. Ọ bụ onye ọrụ gbagburu ya ma tinye ya ozugbo? Ndi snagged ya site na blog? Ndi ese foto? Ọ bụrụ na ịre ahịa ọdịnaya gị na mbọ ị na-agba mbọ ijide gị na ịkwụwa aka ọtọ, mmalite nke onyonyo gị. Ewezuga ikpe a na-ekpe n'ụlọ ikpe, iji ma ọ bụ ịhazigharị ihe oyiyi nwere ike ime ka ndị na-ege gị ntị gharazie ịtụkwasị gị obi. Ihe ngwọta UGC gị kwesịrị iji hụ na ọ nweghị onye nwere ike ịgbanwe ihe oyiyi dị n'etiti ya na ijide ya ma nyefee gị n'aka gị. Y’oburu na ihe oyiyi ahu etinyego na webụ, you ghaghi ijide n’aka na nke a.
Enwere m ikike iji bipụta foto a? - Ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe nwere mmasị ịbanye na UGC. Ha na-eche na ị na-asọpụrụ na ị họọrọ ihe ha iji gosipụta ụwa gị. Agbanyeghị, ndị ezinụlọ ha na ndị enyi ha enweghị ike inwe ụdị echiche ahụ. Yabụ, ka anyị kwuo na onye ofufe Facebook na-enye gị ikikere iji foto ya na ndị enyi ya atọ yi uwe gị. Y’oburu n’inwe iweputa ihe nlere maka ndi mmadu ano, onye obula n’ime ha nwere ike ikpe gi ikpe. O di nwute, usoro ịkpọtụrụ onye ọ bụla na inweta nkwuputa nwere ike ịgwụ ike. Kama ịchụ onye ọ bụla emechara, ịnwere ike ịhọrọ ngwa nchịkọta UGC nke na-anakọta nnabata ụdị na akpaghị aka n'ime arụmọrụ gị.
Kedu ka m ga-esi azụ ma gosipụta ikike onyonyo? Iji kpuchido onwe gị, nweta akwụkwọ na ide akwụkwọ ikike ikikere onyonyo n'etiti onye okike na nzukọ gị. O doro anya, ịnwere ike iji ndekọ email ma ọ bụ akwụkwọ ọnụahịa gosipụta na ị zigara ikike ahụ n'ụzọ ziri ezi, mana nke a na-adị njọ nke ukwuu ma ọ bụrụ na ị na-anakọta ọtụtụ puku ihe onyonyo ndị ọrụ na - ewepụta. UGC na-arụ ọrụ.
Na njedebe nke ụbọchị, foto Facebook na Twitter abaghị uru ịgba akwụkwọ ọtụtụ nde dollar na mkparị PR. UGC bụ ihe dị mkpa nke azụmaahịa ọdịnaya nke oge a, mana ọ chọrọ iji nlezianya gbuo ya. Ihe nkpuchi BuzzFeed na Getty Images / AFP bụ ihe gbochiri, enweghị m obi abụọ ọ bụla na ụlọ ọrụ ndị a enwetaghachiri usoro ha maka ijikwa ikike onyonyo.
Dị ka onye na-ere ahịa, chebe ntụkwasị obi gị, ụzọ gị na ọrụ gị. Nyere ndi obodo anyi aka ka ha zoputa UGC site na nsogbu.
Tags: authenticojiji ọdịnayausoro ọrụ nke facebookFlickriji ihe oyiyiakwụkwọ ikike na-enweghị ezeusoro ojiji nke twitteruGCenweghị ikikeonye ọrụ mepụtara ọdịnaya
Petri Rahja bụ nchoputa na CEO nke Scopshot, a mobile ikpo okwu maka foto na video crowdsourcing. Na mgbakwunye na ahụmịhe ọkachamara na ngalaba IT, Petri nwekwara ahụmịhe njikwa azụmaahịa, gbasara ihe karịrị afọ 20. Ọrụ ndị ọ rụburu gara aga gụnyere Accenture, BEA Systems Inc., Iobox Oy, CRF Box Oy na Iprbox Oy.
9 Ndị na-eme ntanetị na ntanetị na ntanetị